“Inaanan ku guuleysanin abaal marinta Ballon d’Or waa gardaradii ugu weyneyd xirfadeyda” – Franck Ribéry – Gool FM
(Yurub) 16 Juunyo 2019. Xiddiga reer France ee Franck Ribéry ayaa ku tilmaamay inuusan ku guuleysanin abaal marinta Ballon d’Or sanadkii 2013-kii inay ahayd gardaradii ugu weyneyd uu la kulmay xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta.
Franck Ribéry ayaa sheegay inuu ka fiicnaa Cristiano Ronaldo oo abaal marinta ku guuleystay sanadkaas, iyo Lionel Messi oo galay kaalinta labaad.
Ribéry ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “L’Equipe” ee dalka France ayaa wuxuu ku sheegay:
“Waxa ay aheyd wax ka badan niyadjab, waxay aheyd caddaalad darada ugu weyn ee kubada cagta”.
“Ma ahan aniga kaliya, laakiin dad badan, waxaan ahaa kan ugu fiicnaa sanadkaas, waxaana abaal marinta Ballon d’Or kaga dhameystay kaalinta saddexaad”.
“Ma jiraan wax muhiim ah ay Messi iyo Ronaldo ku guuleysteen sanadkaas, balse waxaan dhihi karaa inay tahay is-hoosaysiinta ugu weyn, sababtoo ah taasi waa run”.
Franck Ribéry ayaa kaalinta saddexaad ku dhameystay sanadkaas codeynta abaal marinta Ballon d’Or kaddib markii uu helay cel celis ahaan 23.36%, Messi ayaa ku dhameystay kaalinta labaad isagoo helay 24.72%, halka Cristiano Ronaldo oo ku guuleystay abaal marinta uu helay 27,99%.